Sarkaal katirsan ilaaladda Madaxtooyada oo Muqdisho lagu dilay | KEYDMEDIA ONLINE
Sarkaalkaan ayaa lagu magacaabaa Shariif Maxamed Cali ilaa iyo haddana si sax ah looma oga cidda dishay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sarkaalkaan oo lagu magacaabo Shariif Maxamed Cali ayaa maydkiisa laga soo saaray Hotel Ridwaan oo ku yaallo Isgoyska Ceel-gaabta ee degmada Xamar-weyne sida goob joogayaal u xaqiijiyeen Keydmedia Online.
Ciidamada amaanka ayaa gudaha u galay Hotel-ka, iyagoona kaxeystay maamulka iyo shaqaalaha Hotel-ka si baaritaan loogu sameeyo waxa sababay dhinashada sarkaalka oo si lama filaan ah u dhacday.
Ilaa iyo hadda ma cadda cidda ka dameysay Kiiska dilka sarkaalka balse warar madax banaan ayaa sheegaya in Haweeney la balansaneed sarlkaalka ay Hotel-ka la gashay kadibna geeridiisa kadib goobta isaga baxsatay.
Shariif Maxamed Cali ayaa ka mid ahaa saraakiisha ilaalada madaxtooyada, waxaana xusid mudan in Isgoyska Ceel-gaabta uu ku yaallo Koontarool laga ilaalayo madaxtooyada oo ay ku suganyihiin ciidamo ka tirsan dowladda.
Warar madaxa banaan ayaa sheegaya in sarkaalkaan ay shirqooshay Haweeneyda baxsadka ah.
Wixii ku soo kordho KON kala soco inshallaah